Wasiirro Ka Hadlay Xaaladda Puntland
Wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan DKMG ee Somalia ayaa si kulul u cambaareyay talaabada Puntland qaadday ee raafka dadka ka soo jeeda konfurta Somalia.
Wixii ka danbeyay markii ay ciidamada amniga Puntland ay bilaabeen olole ay ku qab-qabanayaan dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ayaa waxaa isa soo taraya cambaareynta loo jeedinayo talaabada uu maamulka ku dhaqaaqay waxaana iyada oo cambaareynta ugu danbeysay ay ka soo baxday wasiiro iyo xildhibaano dowlada ka ka tirsan kuwaas oo ugu baaqay maamulka Puntland inuu ka fiirsado go’aankaasi islamarkaan uu dib ugu laabto.
Wasiirka Arimaha Bulshada iyo Dhaqancelinta ee DKMG Prof Maxamed Cumar Dalxa ayaa sheegay in arintaasi ay tahay mid lagu kala gaynayo shacabka soomaalyeed isla mar ahaantaana uu maamuku ku degdegay.
Xildhibaan C/qaadir Sheekh Ismaaciil oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee iyagu kahadlay raafka maamul gobaleedka puntland ayaa ku tilmaamy mid laga xumaado isaga oo maamulka ugu baaqayo inuu joojiyo maadaama dadka ay halkasi u doonteen xasilooni iyo amni ay ku nolaadaan.
Warbxinta oo dhemaystira ka Dhegayso qaybta hoose ee boggan